Ihowuliseyili Downhole Motor mveliso kunye nabathengisi | NzuluFast
Sinikezela uluhlu olubanzi lweemveliso ezineenkcukacha ezahlukeneyo zobuchwephesha kwisicelo ngasinye, kubandakanya neemfuno zesiko.
Iimoto zethu zibonelelwa ngeendlela ezahlukeneyo kwiimfuno ezithile.
Rotors kunye neStators
Sinikezela ngamacandelo e-rotors kunye ne-stators kubude obahlukeneyo kunye nobukhulu obahlukeneyo.
Intliziyo yeemoto zethu, amacandelo amandla ayafumaneka kulungelelwaniso oluninzi. Okwethu kufanelekile kumdaka osekwe emanzini (ii-WBM), ioyile esekwe kwioyile (ii-OBM), ii-agitators, kunye nolunye usetyenziso.
Inkqubo yesixhobo soKothusa
Isixhobo se-SGDF Shock System sinokunciphisa ukungqubana kunye nokuphucula ngokumangalisayo ukuhanjiswa kobunzima ngokuvelisa ukusika ngobumnene, ngaloo ndlela kuphuculwe umgangatho we-wellbore kwizicelo ezintsonkothileyo. Isixhobo seSGDF soMothuko sonyusa ukusebenza ngokukuko kwayo nayiphi na inkqubo yokomba apho ukungqubana kungumba.
Izinto ezingaphakathi ziyafumaneka kulo naluphi na uyilo kunye noqwalaselo.
Imotto yethu: "Sisoloko sifumana izisombululo" ---
nakwiimeko ezigabadeleyo kunye neemeko ezinzima
I-torque ephezulu yokufuna imisebenzi yokubhola
Umsebenzi onzima, ocelomngeni awunakulinganiswa neenqwelo zethu ezinzima.
Iimoto zethu zenzelwe ngokukodwa ukubhola ngokomba phantsi kweemeko ezixakekileyo kumhlaba wentaba-mlilo, phantsi kwamaqondo obushushu aphezulu, naxa kufunwa torque egqithisileyo.
Ukunciphisa iindleko kubalulekile kuwo wonke umntu. Kungenxa yoko le nto sinikezela ngeemoto zobomi obude kunye nobomi obandisiweyo bazo zonke izinto zeemoto.
Ingxelo yethu eqinisekisiweyo yeemoto ezikwizinga eliphezulu zithetha ukusebenza ngokukuko kunye neendleko ezisezantsi zokugrumba kuwe.
Iimoto zethu ziqhuba iiyure ezininzi ngaphandle kwesondlo.
Iimpawu kunye neTekhnoloji
Iimveliso ze-DeepFast zidibanisa i-elastomers zaseJamani zobugcisa, uyilo lwejometri kunye nolawulo lomgangatho. I-DeepFast ibonelela nge-stator efumaneka nge-NBR kunye ne-HNBR elastomers esekwe kuhlobo lodaka. Lonke inyathelo lokwenziwa kwe-stator kunye nenkqubo yezinto zijongwa ngononophelo ukuqinisekisa ukuba i-stator ekumgangatho ophezulu.
Iijikelezi ze-DeepFast zenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu kunye nokuchaneka ngokuchanekileyo kwezixhobo zokugaya ezinobunzima. Ukudibanisa iimfuno zezicelo ezithile zeprojekthi, iRotFast rotors zichanekile ngokuchanekileyo kubude obahlukeneyo. Iijikelezi zikhethwe ngokwesiko ukuze zilingane nesicelo ngasinye sokugrumba. Iijikelezi ze-DeepFast zitshizwe nge-chrome yitekhnoloji yaseJamani. Ngodaka olunetyiwa olunomxholo ophezulu we-chloride, i-DeepFast inokubonelela ngee-carbide rotors camera.
Ubuncinci i-50% ngaphezulu kwe-torque kuneemoto eziqhelekileyo ezihla.
2.Ukuphila ixesha elide
Ubuncinci i-100% iphucule intsebenzo xa kuthelekiswa naleyo yeemotor ezihla rhoqo ngenxa yoomatshini bokugaya aba-axis abahlanu okanye iirotors kunye nemimiselo.
3.High Ubushushu Resistance
Ukuya kuthi ga kwi-175 ° C kwiimeko ezinzima.
Idizili, i-oyile ekrwada, ioyile emhlophe yezobuchwephesha. Ukulungele ukujikeleza.
Ubungakanani besiborebore esisebenzayo 8 3/8 "~ 9 7/8"
Umtya oPhezulu oDibeneyo NC 50 IBHOKISI
Umtya oNgezantsi woMdibaniso I-PIN 50 yeNC
43.5 ~ 48kN kusasa
Ephakamileyo Ubushushu Resistance
Uluhlu lweRhafu yokuHamba I-1000 ~ 2500 L / M. 265 ~ 660gpm
Isantya seRotary 42 ~ 104 RPM
Uxinzelelo lweMax Diff 6MPa
Torque kaMax Diff
Ukusebenza koxinzelelo loxinzelelo I-4.5 MPa
I-17636 ~ 26455 lbs
Amandla amakhulu Iikhilomitha eziyi-122
Ubunzima bokuPhakamisa ubunzima
Imfuno yezixhobo zokufaka Ububanzi <7mm
Umxholo weChloride <50000 PPM
Cebisa iOniline Point esekwe ngeoyile 70 ℃
ICandelo laMandla loxinzelelo lweDif
Egqithileyo Icandelo laMandla
Uyilo lwaseJamani lweZithuthi eziDilikayo
IiLobes Downhole Motor
I-Stator Downhole Motor